Lelee, Kpee ekpere na Ije Ozi, Nkebi nke 2
TEXT: Mak 13: 32-37
32 Ma ọ dighi onye ọ bula mara n'ubọchi ahu na oge hour ahu, ọ bughi kwa ndi-mọ-ozi nke di n'elu-igwe, ma-ọbughi Ọkpara ahu, kama ọ bu Nna.
33 Lezienụ anya, na-ekpenụ ekpere, n'ihi na unu amaghị mgbe oge ahụ ruru.
34 N'ihi na Nwa nke madu di ka nwoke nke nēje ije nke-uku, onye rapuru ulo-ya, nye kwa ndi-orù-ya ikike, nye kwa onye ọ bula ọlu-ya, nye onye-ọnu-uzọ iwu iwu ile anya.
Ya mere, lezienu anya: n'ihi na unu amataghi mb͕e onye-isi ulo ahu gābia, n'anyasi, ma-ọbu n'etiti etiti abali, ma-ọbu n'ite nkpuchi, ma-ọbu n'ututu:
36 Ka ọ ghara ibia na mberede, we hu ka ọ nāraru ura.
37 Ihe m na-agwa gị ka m na-agwa mmadụ nile, Lelee.
Billy Graham kwuru, sị, "A na-ewere ozizi nkụzi banyere Ọbịbịa nke Abụọ nke Kraist dị ka 'ụbọchị ụbọchị' ikwusa ozi ọma. Ma ọ bụghị ọzọ. Ọ bụ naanị Ray nke olile anya nke na-egbuke egbuke dị ka ọkụ na-egbuke egbuke n'ime ụwa gbara ọchịchịrị. "
Na ozi ikpeazụ anyị, anyị malitere ile Parable nke Onye nche ọnụ ụzọ, ma ọ bụ Ụkpụrụ Ezigbo Nna, inye anyị nduzi ihe anyị kwesịrị ime ka anyị na-echere ọbịbịa nke abụọ nke Jizọs Kraịst. Site n'amara Chineke, anyị kwesịrị ikwesị ntụkwasị obi ma rụọ ọrụ ruo mgbe Nna-ukwu ga-alọghachi. Onye ọ bụla n'ime anyị nwere ọrụ ọ ga-arụ n'ime nnwere onwe nke Onyenwe anyị.
Jisos malitere ilu a na iwu ato nke ayi kwesiri irube isi. Nke mbu bu, "Lezie anya." Okwu a pụtara ile anya ma ọ bụ ịṅa ntị. Jis] s ch] r] ka anyŽ naerubere Ya isi, iwu Ya na ihe nlereanya Ya. Anyị ga-abụ ndị nnọchianya Ya n'ụwa a. Ọ bụrụ na ị zitere mmadụ ka ọ bịachite anya gị n'ihu otu ikike, ị ga-achọ ka ha mee ihe n'ụzọ ụfọdụ. N'otu aka ahụ, Jizọs chọrọ ka anyị na-akpa àgwà n'ụdị ụwa n'ihi na ụwa na-ele anyị anya iji hụ ihe Jizọs dị. Ọ bụrụ na anyị ga-agbaso ihe nlereanya Jizọs, anyị aghaghị ịṅa ntị na Ya.
Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime anyị nwere anya anyị nchụso ụwa, ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma ọ bụ ọganihu onwe onye. Anyị adighi njikere maka nloghachi Jisos, ma anyi adighi njikere inwe njikere. Anyị etinyewo anya anyị n'ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụghị Jizọs Kraịst. Ònye ka ị na-aṅa ntị taa? Ònye nwere ntị gị? Ònye nwere anya gị? Karịsịa, onye ma ọ bụ ihe jidere uche gị? Ị na-ekwu na Jọn, "Ọbụna, bịa, Onyenwe anyị Jizọs"? Ma, ị na-asị, "Bịa, Onyenwe anyị Jisọs, mana naanị mgbe m mechara mee ihe m chọrọ ime"?
Anyị apụghị inweta amara nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst iji nweta ndụ a ma ọ bụrụ na anyị aṅa ntị n'ihe Jizọs na-agwa anyị. Ọ bụrụ na anyị na-aṅa ntị n'ozi ndị ụwa, anụ ahụ, na ekwensu na-eziga, anyị ga-ejedebe afọ ojuju, nchegbu, ịda mbà n'obi, na nkụda mmụọ. Ụwa a enweghị ike imeju ọchịchọ anyị kachasi ike. Anyị ekwesịghị ịhapụ oge ịchụso obi ụtọ na mmezu ebe a na-apụghị ịhụ ya. Kama nke ahụ, dị ka ndị òtù nke Nna-ukwu nke Nna-ukwu, ka anyị ṅaa ntị na Nna-ukwu nke Ụlọ, Jizọs Kraịst. Ọ bụ ezie na o nwere ike iyi na ọ gara njem dị anya, ọ na - anọnyere anyị mgbe nile, Ọ gaghị ahapụ anyị, n'otu ụbọchị, Ọ ga - alaghachi kpọbata anyị n'ebe Ọ kwadebeere anyị.
Frances J. Crosby dere, sị:
Lelee ma kpee ekpere na mgbe Nna-ukwu ga-abịa,
Ọ bụrụ n'ụtụtụ, n'ehihie, ma ọ bụ n'abalị,
Ọ nwere ike ịhụ oriọna na windo ọ bụla,
Gbanyụọ, na-ere ọkụ ma na-enwu gbaa.
Lelee ma kpee ekpere, ma hapụkwa ọrụ anyị,
Ruo mgbe anyi nuru olu nwoke ahu;
Mgbe ahụ, ya na Ya oriri oriri alụmdi na nwunye,
Anyị ga-aṅụrị ọṅụ mgbe nile.
Lezie anya ma kpee ekpere, Onyenwe anyi nyere iwu;
Lelee anya ma kpee ekpere, 'Ogologo oge.
N'oge na-adịghị anya Ọ ga-ezukọta ndị Ya hụrụ n'anya,
Gaa n'egwurugwu obi ụtọ nke abụ.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị bụghị onye kwere na Jizọs Kraịst, ana m agba gị ume ka ị tụkwasị ya obi n'ihi na Ọ ga-abịa ọzọ, ị chọghị ka a hapụ gị. Nke a bụ otu ị ga - esi tinye okwukwe gị na ntụkwasị obi na Ya maka Nzọpụta site na nmehie na ihe si na mmehie pụta.
Nke mbụ, kweta na ị bụ onye mmehie, nakwa na ị mebiri iwu Chineke. Akwụkwọ Nsọ na-ekwu na Ndị Rom 3:23: "N'ihi na mmadụ niile emehiewo, ha adịghịkwa eru ebube Chineke."
Nke abụọ, nabata eziokwu ahụ bụ na e nwere ugwo maka nmehie. Akwụkwọ Nsọ na-ekwu na Ndị Rom 6:23: "N'ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie bụ ọnwụ ..."
Nke atọ, nata eziokwu na ị nọ n'okporo ụzọ hell. Jizọs Kraịst kwuru na Matiu 10:28: "Unu atụkwala egwu ndị na-egbu ahụ, ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi: kama kama ịtụ egwu onye ahụ nke nwere ike ibibi ma mkpụrụ obi ma ahụ na hel." Ọzọkwa, Bible na-ekwu na Mkpughe 21: 8: "Ma ndị na-atụ egwu, na ndị na-ekweghị ekwe, na ndị na-asọ oyi, na ndị na-egbu ọchụ, na ndị na-akwa iko na ndị dibịa afa, na ndị na-ekpere arụsị, na ndị ụgha, ga-ha akụkụ na ọdọ nke na-ere ọkụ na brimstone: nke bụ ọnwụ nke abụọ. "
Ugbu a bụ akụkọ ọjọọ, mana ozi ọma a bụ. Jizọs Kraịst kwuru na Jọn 3:16: "N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otú a, na O nyere ọbụna Ọkpara Ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bula nke kwere na Ya we ghara ila n'iyi, kama ka o nwe ndu ebighi ebi." Naanị kwere n'ime obi gị na Jizọs Kraịst nwụrụ maka mmehie gị, e liri ya, ma si na ndị nwụrụ anwụ bilie site n'ike nke Chineke maka gị ka i wee dịrị ndụ ruo mgbe ebighi ebi na Ya. Kpee ekpere ma rio Ya ka o bata n'obi gi taa, ma O ga.
Ndị Rom 10: 9 & 13 na-ekwu, sị, "Ọ bụrụ na ị ga-eji ọnụ gị kwupụta Onyenwe anyị Jisọs, ma ị ga-ekwenye n'obi gị na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị ... N'ihi na onye ọ bụla nke ga-akpọku aha Onyenwe anyị ga-azọpụta. "
Ọ bụrụ na ị kwenyere nà Jizọs Kraịst nwụrụ n'elu obe maka mmehie gị, e liri ya, wee bilie na ndị nwụrụ anwụ, ma ịchọrọ ịtụkwasị Ya obi maka nzọpụta gị taa, biko kpeere m ekpere a dị mfe: Nna dị nsọ bụ Chineke, ana m aghọta na m m bụ onye mmehie nakwa na m mere ụfọdụ ihe ọjọọ na ndụ m. Enwere m mwute maka mmehie m, ma taa, m na-ahọrọ ịhapụ mmehie m. Maka Jisos Kraist, biko gbaghara m nmehie m. Ekwenyere m na obi m nile na Jizọs Kraịst nwụrụ maka m, e liri ya, ma bilie ọzọ. M tụkwasịrị obi na Jizọs Kraịst dịka Onye Nzọpụta m, m na-ahọrọ ịgbaso Ya dịka Onyenwe anyị site na ụbọchị a gaa n'ihu. Onyenwe anyi Jisos, biko bata n'ime obi m ma zoputa nkpuru obi m ma gbanwee ndu m taa. Amen.
Ọ bụrụ na ị tụkwasịrị obi na Jizọs Kraịst dịka Onyenzọpụta gị, ị kpere ekpere na ekpere ma jiri ya n'obi gị, ana m agwa gị na dabere n'Okwu Chineke, a na-azọpụta gị ugbu a na Hel na ị ga-aga Eluigwe. Nabata na ezinụlọ nke Chineke! Ekele na ime ihe kacha mkpa ná ndụ na nke a na-anata Jizọs Kraịst dị ka Onyenzọpụta gị. Iji nwetakwuo ihe ọmụma iji nyere gị aka ito eto na okwukwe ọhụrụ gị n'ime Kraịst, gaa Oziọma Light Society.com ma gụọ "Ihe Ị Ga-eme Mgbe Ị Banyesịrị n'Ụzọ." Jizọs Kraịst kwuru na Jọn 10: 9, "Abụ m ọnụ ụzọ: site n'aka m ma ọ bụrụ na onye ọ bụla abata abata, a ga-azọpụta ya, ọ ga-abanye ma pụọ, wee chọta ebe ịta nri."
Chineke hụrụ gị n'anya. Anyị hụrụ gị n'anya. Ka Chineke gọzie gị.